Pizzeria Bandy Grills | Nleta Hultsfred
hem » Rie ma drinkụọ » Nri nri & pizzerias » Pizzeria Bandygrillen
Vetlandavägen dị na Målilla bụ Bandy Grill.
N'ebe a ị nwere ike ịhọrọ n'etiti burgers, sausaji, meatballs, kebabs, ọkụkọ.
N'oge ọkọchị, a na-enwekwa mbara ala dị n'èzí.
Ugboro abụọ 108, 570 82 Milili, Sverige
Nyocha 187 na Google
3/5 3 izu gara aga
Pizza na kebabs dị mma, na-eju oke. Ọ masịrị m na akwụkwọ nri maka kebab dị gburugburu efere ka m nwee ike ịdị iche iche. N'aka nke ọzọ, ụlọ mposi chọrọ ihicha nke ọma site n'ala ruo n'uko. Na-atụ anya ịdị ọcha ka mma mgbe ị na-eri nri!
Ọnye na -bụ Niclas Sör?
Ọmarịcha kebab mara mma nke ukwuu, kwesịrị ịkwụsị ma ọ bụrụ na agụụ na-agụ.
Aha ya bụ Mattias Johansson
2/5 ọnwa 5 gara aga
Gbanwee ụgbọ mmiri ahụ na Målilla Pizzeria wee bute Pizzeria Bandygrillen. Ejiri mmetụta, akara aka edepụtara na anyanwụ na-acha odo odo - na-atụ anya na nri dị mma. Chọrọ pizza na uto niile. Banana, anụ ezi fillet, curry, bea. Edetụ ire .... ihe ọ bụla. Echere m na m furu efu uto m, ma eleghị anya? N’okpukpe, ọ bụghị uru ntụgharị ma ọ bụ ego ahụ .Ma, ndị ọrụ ahụ dị mma mana ọ naghị enyere aka. 2 kpakpando maka ngwa ngwa (otu onye ahịa)
2/5 ọnwa 4 gara aga
Pizza abụghị nnukwu nsogbu mana ndị na-anụ ụtọ ihe ụtọ. Mwepu maka isi anwụrụ sịga na-arụ ọrụ.
3/5 ọnwa 4 gara aga
Ọ dị mma, ezigbo Pizza, obere obere oge na oven